Is Social Media Kuuraya Brand Yako? | Martech Zone
Ini ndiri zvishoma paruzhowa nezve iyi infographic kubva Mukurumbira Kushambadzira. To kuuraya mucherechedzo, iwe unonyatsoda kuita kumwe kukuvara uye ini handina chokwadi chekuti iyi infographic inonyatso tsanangura izvo. Kunyangwe zvichitora kusava netariro maonero enhau enhau, kuuraya kunenge kuri kuwedzeredza. Zvemagariro venhau zvingave sei kukuvadza zita rako inogona kunge iri zita rakakodzera.
Zvemagariro midhiya kushambadzira inyaya-inopokana zvikuru. Zvakakosha nguva yako here? Zvinobatsira here kana kukuvadza pesvedzero yako? Uye ndiani arikunyatso tarisa: vatengi vatsva, vatengi varipo, vangangoita bhizinesi shamwari, kana mumwe munhu zvachose? Pindura mibvunzo yese iyi nechando, zvakaoma chokwadi.
Zvakare, ongororo yakapihwa chidimbu uye haitore hanya kugadzirira uye zviwanikwa zvakaitwa nemakambani muhurongwa hwavo hwemagariro. Ini ndaizotarisira kuti makambani adzidza chidzidzo chavo uye havana kungo svetukira mune vezvenhau vasina kuvaka zano rakanaka remukati (pamwe nehurongwa hwekutaurirana nekuisa zvinotarisirwa nevashandi) Hazvinyatso kuitika kuti tichaona marangi achiurayiwa… asi isu tinoona akawanda emhando anotambura zvisina basa nekuti ivo havana kugadzirira!
Tags: muchisoevanhu vezvenhau